पूँजीगत लाभकर न्यून संकलन | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय पूँजीगत लाभकर न्यून संकलन
on: July 11, 2019 सम्पादकीय
सरकारले आयकर शीर्षक अन्तर्गत उठाउने पूँजीगत लाभकर संकलनको सम्भावना ठूलो भए पनि संकलन भने न्यून रूपमा हुने गरेको छ । करका स्रोतलाई फराकिलो पार्ने प्रयास भइरहे पनि सम्भावित क्षेत्रबाट नै कर नउठ्दा राजस्व संकलनको सरकारी लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिन्छ ।
सम्पत्ति निसर्ग (विक्री वा अन्य तरीकाबाट हुने स्वामित्व हस्तान्तरण) गर्ने व्यक्तिले सम्पत्ति निसर्गबाट लाभ प्राप्त गरेको अवस्थामा पूँजीगत लाभकर लाग्छ । अहिले घरजग्गा बिक्री र सेयर बिक्री गर्दा प्राप्त हुने लाभमा पूँजीगत लाभ कर लगाइँदै आएको छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीगत समस्या, अनुगमनमा कमी र कर संकलनको समीक्षा राम्ररी गर्न नसक्दा यी क्षेत्रबाट उठ्न सक्ने धेरै कर रकम राज्यले गुमाइरहेको छ ।
अधिकृतहरूलाई तजबिजी अधिकार बढी दिँदा पनि कर असुली प्रभावित भएको हो । त्यसैले कर प्रशासनमा ठूलै परिवर्तन गरे मात्र राज्यले अपेक्षित मात्रामा राजस्व पाउन सक्छ ।
व्यावसायिक घरजग्गाको रू. १० लाखभन्दा बढी कारोबार भएमा महानगरपालिकामा १० प्रतिशत र नगरपालिकामा ५ प्रतिशत पू“जीगत लाभकर लिने व्यवस्था आगामी वर्षको बजेटले गरेको छ । रू. ३० लाखभन्दा बढीको कारोबारमा पू“जीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था भएकोमा करको दायरा फराकिलो पार्न रू. १० लाखको थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको हो । वास्तविक मूल्यभन्दा निकै कम मूल्य अर्थात् थैली तोकेर घरजग्गा कारोबार हुने गरेको छ । त्यसैले पू“जीगत लाभकर धेरै उठ्न नसकेको हो । घरजग्गाको थैली राख्दा कम मूल्यमा राख्ने गरिए पनि सरकारले कुनै कारणले जग्गा अधिग्रहण गर्नुप¥यो भने त्यसको अधिक मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति माग्ने गरिएको छ । जति थैली रकम राख्ने गरिएको छ त्यसै अनुसार क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाउने हो भने कम थैली तोक्ने प्रक्रियालाई केही मात्रामा कम गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय राजधानी काठमाडौं बाहिर जग्गाको मूल्य निकै बढेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले ती क्षेत्रको जग्गा कारोबारको अनुगमन राम्ररी गर्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा जग्गा कारोबार ब्रोकर कम्पनी मार्पmत गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयन भए । यसो हुन सकेको भए पूँजीगत लाभकर उठाउन निकै सजिलो हुने थियो । कम जनशक्ति र सूचनाप्रविधिको पर्याप्त प्रयोग नहु“दा जग्गा कारोबारमा सरकारले कर गुमाइरहेको छ ।
थ्रेसहोल्डभन्दा कम रकममा समेत लाभकर लिने गरिएको पनि पाइन्छ । यद्यपि कानूनले थ्रेसहोल्डभन्दा कम रकममा कारोबार भएको सम्पत्तिलाई कर लाग्नु नपर्ने सम्पत्ति मानेको छ ।
सरकारले कर्पोरेट क्षेत्रबाट पनि पूँजीगत लाभकर गुमाइरहेको छ । कर्पोरेट क्षेत्रमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरमा अझ बढी समस्या देखिन्छ । एनसेल लाभकरको विवाद यसको प्रमाण हो । थुप्रै कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भइरहेको पाइन्छ । तर, शेयर संरचनाको स्वामित्व परिवर्तन होस् वा कम्पनीकै स्वामित्व परिवर्तन होस्, तिनको कर निर्धारण स्पष्ट छैन । टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको आप्mनो स्वामित्व आक्जियाटालाई बेच्दा कर कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारीले नै लाभकर तिर्न पर्दैन भनेको दाबी समाचारमा आएकै हो । अन्य कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन हुँदा पनि यस्तै भएको आशंका छ । त्यही भएर कर्पाेरेट कम्पनीबाट उठेको पूँजीगत लाभकरको ग्राफमा वर्षैपिच्छे निकै अन्तर देखिन्छ । गत आव अर्थात् २०७४/७५ मा ९ हजार ७२२ कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भएको थियो भने त्यसको अघिल्लो वर्ष ८ हजार ८३४ को यस्तो भएको थियो । तर, त्यसबाट प्राप्त पूँजीगत लाभ २०७४/७५ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै कम देखिन्छ । स्वामित्व परिवर्तन भएको प्रमाणपत्र नै कर कार्यालयमा नपुगेको पाइएकाले यस क्षेत्रबाट लाभकर राम्ररी नउठेको आकलन गर्न सकिन्छ ।
नेपालको कर प्रशासनमा निकै समस्या छ । त्यसैले कर प्रणालीमा नै ठूलो परिवर्तनको आवश्यकता छ । सूचनाप्रविधिको उपयोग गरी सबै अभिलेख कर कार्यालयसँग आबद्ध गर्नु जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै कर अधिकृतहरूलाई तजबिजी अधिकार बढी दि“दा पनि कर असुली प्रभावित भएको हो । त्यसैले कर प्रशासनमा ठूलै परिवर्तन गरेमात्र राज्यले अपेक्षित मात्रामा राजस्व पाउन सक्छ ।
पूँजीगत लाभकर र गणना विधि
पूँजीगत लाभकर संकलन : सम्भावना ठूलो, संकलन न्यून
पूँजीगत लाभकरको विषय टुङ्ग्याउन असारसम्मको समयसीमा